Suldaan Siciid Maxamed Garaase oo Booqasho la xidhiidha dhanka iskuxidhka Dhaqanka Puntland iyo DDSI. - Cakaara News
Jigjiga(CakaaraNews) Axad Sep,01,2013.waxaa maalmahanba booqasho kujooga xarunta ddsi ee magaalada jigjiga Suldaan siciid macamed garaase oo ka mida suldaanada Hogaaminta dhaqanka ee Dawlada Punt-land ugu muhiimsan si weyna loogu soo dhaweeyay mgaalaada jigjiga. Booqashda Suldaan Siciid Garaase ayaa dabajoogta casuumaad uu hore ugu fidiyay madaxweynaha DDSI mar uu booqasho DDSI uu ku yimid madaxweynaha Puntland Mudane C/raxmaan.
Sidoo kale Suldaan Garaase oo si weyn ay magaalada Jigjiga ugu soo dhaweeyeen Madaxda ugu saraysa Xukuumada DDSI,Odoyaasha Dhaqanka iyo qaybaha bulshada ayaa aad uga mahadceliyay Qaabilaada iyo soo dhawaynta Walaalnimo ee ay ku dheehnayd Kal iyo laabta lagu soo dhaweeyay.
Dhanka kale Suldaan Garaase iyo Garaadka Guud ee Beesha Absame iyo Adeerkood Garaad maxamuud garaad Dool iyo Guurtidiisa ayaa Qorshaynaya Abuurida Xidhiidh iyo Isdhexgal adag oo dhexmara Hogaaminta Dhaqanka DDSI iyo iyo Dhigooda Puntland kuna guda jira falnqaynta jawiga qabsoomida kulamo balaadhan iyo Booqashooyin ka dhici Doona Punt-land iyo DDSI.